Filannoo Itoophiyaa 2012: Guyyaa filannoo Hagayya 10 jedhameerratti paartilee siyaasaa waliin mariyatamaa jira - BBC News Afaan Oromoo
Boordiin Filannoo Filannoon Biyyaaleessaa ALI Hagayyaa 10 bara 2012 akka gaggeefamuuf karoorfamu ibse.
Karoorri bordichaan baafame kunis har'a qaamolee dhimmichi ilaallattu waliin irratti mari'atamaa jira.
Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Burtukaan Miidhagsaa, karoorri bboridichaan bahee kunis karoora isa xummuraa akka hin taane himan.
Haala adeemsaa wayita ibsanitiis, karoora kana baasuuf seeroota garaagaraa wabeefanneerra jedhan.
Boordin filannoo biyyaalessaa filannoo bara 2012 ilaalchisuun qooda fudhattoota walin har'a mari'achaa kan jiru yoo ta'u, marii kanarratti karoorri yeroo galmee dorgomtootaa, filattootaa, duula nu filadhaa fi kunnen biroo irratti mari'atama jedhameera.
Dhaabbileen siyaasaa, ogeeyyiin miidiyaa, qaamoleen nageenyaa fi qaamoleen biroo hirmaachaa jiru.
Miseensi boordii filannoo Itoophiyaa Dooktar Abarraa Dagafaa mariin kun, yaadawwan filannichaaf galtee ta'an argachuuf nu gargaara jedhan.
Hojiin waajjiraalee naannolee filannoo 547 ijaaruu fi raawwachiistota filannoo qacaruu hojiilee yeroo dhiyootti hojjetaman ta'uus walitti qabduun boordichaa Burtukaan Miidhagsaa himaniiru.
Raawwachiistota filannoo qacaruun walqabatee ebbifamtoota haaraa qacarree hojjechiisuf yaadnee turrus muuxannoo rifarandamii Sidaamaa irraa akka hubanetti dogongorootni tokko tokko mudataa turan jedhan.
Kanaafis hojjetoota fi ijaarsawwan dubartootaa siyaasarraa bilisa ta'an fayyadamuuf karoorfanne jedhan. Filannoo biyyaalessaa bara 2012 irratti namootni 250,000 ta'an hojii raawwachiistummaan akka hirmaatan himameera.
Dhaabbileen mormitootaa karoora dhiyaate kanarratti yaada akka kennan eegama. Akkuma nu qaqabeen isin dhiyeessina.
Boordii Filannoo Itoophiyaa: 'Riifarandamii Sidaamaaf bajata ramadee hojii eegaleera'